Muriel Harris သည်ထူးချွန်သောဝန်ဆောင်မှုဆု - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာရေးခြင်းစင်တာများအသင်း
၎င်း၏ပထမဆုံးလက်ခံရရှိသူအဖြစ်နာမည်ပေးခံရပြီးအခြားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာရေးဆရာများအသင်း (IWCA) ညီလာခံတွင်ပေးအပ်ခဲ့သည့် Muriel Harris ၏ထူးချွန်သောဝန်ဆောင်မှုဆုသည်နိုင်ငံတကာအရေးအသားစင်တာအသိုင်းအဝိုင်းကိုအကျိုးအမြတ်များစွာရှိပြီးကျယ်ပြန့်စွာအခြေပြုသည့်နည်းလမ်းများကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။
လျာထားချက်များကိုစာမျက်နှာနံပါတ်များပါသည့် PDF document တစ်ခုအနေဖြင့်ပေးပို့သင့်ပြီးအောက်ပါပစ္စည်းများပါ ၀ င်သင့်သည်။
အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့်စာတွင်အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူအမည်၊ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဗဟုသုတသို့မဟုတ်အမည်ခံရေးသားသူ၏စင်တာအသိုင်းအဝိုင်းသို့ ၀ င်ရောက်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်သင်၏အမည်၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုနှင့်အီးမေးလ်တို့ပါ ၀ င်သည်။
အသေးစိတ်အထောက်အပံ့စာရွက်စာတမ်းများ (အများဆုံးစာမျက်နှာ ၅ မျက်နှာ) ၎င်းတို့တွင်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းဗီဒီယို၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့မဟုတ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားသည့်စာပေ၊ ပုံပြင်များ၊ မှတ်တမ်းများသို့မဟုတ်အမည်စာရင်းတင်သွင်းသောမူရင်းအလုပ်မှကောက်နုတ်ချက်များပါဝင်နိုင်သည်။
အခြားအထောက်အပံ့ပေးစာ (optional ပေမယ့်2ကန့်သတ်ထားသည်)
အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းအားလုံးကို ဤဖောင်တွင် အီလက်ထရွန်းနစ်စနစ်ဖြင့် တင်သွင်းသင့်သည်- https://forms.gle/GwBQazbh3q9sPh2w6. မေးခွန်းများကို Jon Olson သို့ ညွှန်ကြားသင့်သည် (jeo3@psu.edu), Clint Gardner (Clint.Gardner@slcc.edu) နှင့် Leigh Ryan (LR@umd.edu“MHOSA Nomination Question” ပါ၀င်သော အီးမေးလ်အကြောင်းအရာလိုင်းဖြင့်)
ပစ္စည်းများအားလုံးကို 30 ခုနှစ် ဇွန်လ 2022 ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး တင်သွင်းရပါမည်။
MHOSA ၏သမိုင်းကြောင်းကိုဖတ်ပါ Lab မှသတင်းလွှာ 34.7, စစ။ 6-7 ရေးသားခြင်း .
2016: PGillespie aula နှင့် Brad Hughes
2006: အဲလ်ဘတ် DeCiccio
1997: Byron နေပါ
1991: Jeanette Harris က
1984: Muriel Harris က